Imininingwane: 1. I-tile enhle ye-ceramic 2. Ubukhulu obuningi, imiklamo ehlukahlukene 3. Ikhwalithi enhle, amanani entengo yokuncintisana 4. MOQ: 50pcs kumklamo owodwa 5. Isikhathi sokuhola: 35days 6. I-OEM iyamukeleka Ukusekelwa Umsebenzi wobuciko upendwe ngesandla kumathayili ipensela ethambile bese ipendwe ngesandla bese idutshulwa ezingeni lokushisa eliphakeme kakhulu ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu futhi ibhalwe kakhudlwana futhi ikhanya ngombala ukwedlula indlela. Imikhiqizo yethu iletha ubuhle nesitayela esingenakuqhathaniswa ezindaweni zokuhlala nasendaweni yehhovisi fo ...
Amathayili ethu odonga asebenzisa indlela ye-ceramic nomsebenzi wokuklama olethwe kusuka ku-zenith yamasiko ombuso waseChina, amathayili wobumba acwebezelwe afakwa emisebenzini yobuciko eyenziwe ngokwezifiso. Amathayili odonga manje asetshenziswa kabanzi ezindaweni eziningi, njengendawo yokubasa umlilo, indlu yokugezela, ikhishi, i-swimming pool kanye negumbi lokuhlala. Ziyisihlobiso esihle sobuciko ekhaya lakho nasehhovisi. Incazelo Yomkhiqizo Oningiliziwe Ngenxa yesandla sawo esidwetshiwe, akuyona into engavamile ukuthola amaphutha ngezikhathi ezithile, ukuqhekeka, noma ukuhlukahluka komthunzi ...
Umhlobiso wethu wethebula lamathayili konke kwenziwa ngezandla kusetshenziswa indlela ye-ceramic nomsebenzi wokuklama olethwe kusuka ku-zenith yamasiko ombuso waseChina, amathayili wobumba acwebezelwe afakwa emisebenzini yobuciko eyenziwe ngezifiso. Ziletha ubuhle nesitayela esingenakuqhathaniswa ezindaweni zokuhlala nasendaweni yehhovisi ekwakheni impilo enhle kakhulu. Ngemikhiqizo yeFeshini, uzothola imibono nogqozi lokusiza ukuhlobisa nokujabulisa isitayela. Izici 1. Isandla esenziwe ngopende, esicwebezelisiwe nesithandweni somlilo sihlobisa ngobumba ...
Imininingwane 1.Fine tile Ceramic 2.Multi osayizi, imiklamo ehlukahlukene 3.Isilinganiso esilinganisekayo ngekhwalithi ephezulu 4.MOQ: 60pcs kumklamo owodwa 5.Isikhathi sokuhola: 20-35days Sinemiklamo eminingi oyikhethayo. Sicela uxhumane nathi uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngamathayili ethu. Amathayili ethu enziwe ngezandla. Thenga la mathayili ahlelwe ngokulenga kalula! Lesi kungaba isipho esihle salowo mthandi wobuciko, umnikazi webha, umngane, ilungu lomndeni, noma uzigcinele wena! Lesi sakhiwo singenza okuhle kubha, indawo yokudlela ...
Ceramic okuhlobisa Tiles Border
Ngenxa yokudubula kancane nokupholisa kwenqubo, imikhiqizo yabo ingathatha ukukhanya kwelanga, umswakama, ibala, ukushisa, nombala uzohlala unjalo. Lokhu ukuqina okuphezulu kubenza babe bakhulu ezinhlelweni zokusebenza ezinjengama-hotplates kanye nokuboniswa kwangaphakathi nangaphandle. Amathayili Wenziwe Ngezandla Ngokumangalisayo Enomklamo Owakhiwe Ngesandla. Amathayili asetshenziselwe amakhulu eminyaka ukudala phansi nezindonga eziyinkimbinkimbi. Amathayili angahlelwa ngemiklamo engenamkhawulo ukudala iphethini ehlukile ...
Sinezinklamo ezahlukene zokukhetha kwakho. Futhi singapenda imiklamo yakho kuthayela. Futhi insizakalo ye-OEM iyatholakala. Uzibuthe ongemuva kwawo unganamathiselwa kunoma iyiphi indawo eyisiqalo nebhodi kazibuthe. Njengeminyango yesiqandisi yensimbi, amashalofu wensimbi, ama-hoods ebanga, ama-ovini, amakhabethe wokugcwalisa amahhovisi, iminyango yezokuphepha, amabhodi amade kazibuthe, amabhodi amhlophe kazibuthe, amabhodi wokudweba wezingane kazibuthe, njll. khangiswa ku-g omnene ...
Ama-coasters ethu enziwe ngezandla angumsizi ophelele ekusakazeni kwakho kokudlela. I-Felt-backed ukuvikela itafula futhi idwetshwa ngesandla kuphela futhi inombala ogqamile futhi okhanyayo ngombala ukwedlula indlela. Ama-coasters ethu azoba yisipho esikhethekile nesingafani nse sokufudumeza indlu, usuku lokuzalwa neminye imikhosi… noma ukukhombisa nje ukuthi ubakhathalele kangakanani abantu obathandayo! Ungawasebenzisa njengama-coasters wetiye, ama-coasters womshado, ama-decors etafuleni… Azokwakhelwa wena kuphela! Inqubo Main ukukhiqizwa Zonke wor ...